Kumaankun soogalooti ah oo gurya la’aan xoog lihi soo foodsaareyso - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kumaankun soogalooti ah oo gurya la’aan xoog lihi soo foodsaareyso
60 000 oo soogalooti ah eyey gurya la'aani soo foodsaari doontaa.
La daabacay tisdag 24 oktober 2017 kl 09.46
Qiyaastii 60 000 oo qof oo soogalooti cusub ah ayaa 1-da bisha maarso ee soo socota waxaa ka dhaci doona kunturaadii ey degmooyinku dadkaas laba sano ka hor guryo ku dajiyeen.
Su’aasha imminka isweydiinta leh ayaa ah xagee dadkaas soogalootiga ahi dagi doonaan haddii kunturaadaha guryahaas lagu dajiyy ey dhacdo.
Tusaale ahaan degmada Haninge oo xisbiga Sooshaalku maamulo ayaan ilaa hadda wax jawaab ah u heyn meesha ey dagi doonaan dadka soogalootiga ah ee dagmadaas gurya ahaan ugu meeleysan.
Jesper Schönberg oo degmadaas ka hawlgala ayaa sheegey in degmooyin aad u yari ey xalinta dhibaatadaas ku hawlan yihiin:
- Waxaan qabaa in dhammaan degmooyinka dalkaan ey dhibaata xoog lihi xalinta dhibaatadaan ka heysato. Waxaa noo wada muuqda in dad aad u yari gurya dagaan ah ey heli karaan gaar ahaan qoysaska ilmaha leh, ayuu yiri Jesper Schönberg.
Dadkaas soogalootiga ah oo ah tira aad u farabadan banaanka looma soo wada tuuri karo dhanka kalana waxaa jira dad sanooyin badan guryahaas degmooyinka safaf dheer dheer ugu jirey oo aan iyagana la dhayalsan karin.
Degmada Nacka oo uu xisbiga Modaraad-ku xukumo ayaa laba sano ka hor degmadaas dejisey soogalooti cusub oo kor u dhaafaya ilaa iyo kun qof laakiin maamulka degmadaas ayaa hadda adkeynaya sharciyada guryaha ee dadkaas degmadooda lagu dajiyey.
Frida Plym Forshell oo degmada Nacka u qaabilsan suuqa shaqada ayaa waxay tiri sidan:
-Degmada Nacka wax mas’uuliyad ahi kama saarna in dadkaas soogalootiga ahi ey sii daganaadaan guryahaas laba sano ka hor la dajiyey, degmaduna dadkaas soogalootiga ah uma damaanad qaadi karto guryo cusub oo ey dagaan marka mudadaasi ey dhammaato, guryaha ey dadkaasi dagan yihiina waanu ka saari doonaa, mana jiraan guryo kale oo aanu dadkaas soo galootiga ah dajineyno, ayey tiri Frida Plym Forshell.
Abderisak Hussein wuxuu degan yahay degmada Nacka, wuxuuna ka mid yahay dadka soogalootiga cusub ah oo ey raadka ku yeelan doonto go’aankaas ad-adag ee ey degmada Nacka qaadatey. Abderisak Hussein oo dhibaatada dhanka guriga ka heysata ka hadlaya ayaa yiri sidan:
-Degmadu waxay ii sheegtey in aan guri deegaan ah raadsado laakiin taas waxaa ka horeysa in aan shaqo helo, haddii guri degaan ah aanan helinna taasi suurtagal ma noqon karto, ayuu yiri Abderisak Hussein.